Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
Seychelles waxay kujiraan Showga TV-ga Jarmalka “Markabka Riyada”
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Seychelles waxay kujiraan Showga TV-ga Jarmalka “Markabka Riyada”
Markab weyn oo la raacayo, silsiladdii Jarmalka ee "Doontii Riyada" ayaa ku dhacday badweynta Hindiya, sida Jasiiradaha Seychelles waxaa lagu soo bandhigay barnaamijka caanka ah ee TV-ga Jarmalka, "Das Traumschiff" sida looga yaqaan dalkiisa hooyo, horaantii bishaan.
Waxaa lagu soo bandhigay 1981, taxanaha telefishinka Jarmalka wuxuu noqday mid ka mid ah barnaamijyada TV-yada ee loogu daawashada badan yahay dalka, ka dib MS Amadea markii ay ku safraysay safarkiisa si ay u soo baarto meelaha dalxiiska caanka ku ah ee adduunka oo dhan.
Seychelles oo ka muuqatay 'Doontii Riyada' waxay ahayd mashruuc ay bilaabeen Guddiyada Dalxiiska Seychelles '(STB) Agaasimihii hore ee suuqa Jarmalka, Mrs. Edith Hunzinger sanadii 2019 ka hor faafida.
Dhacdadii Seychelles waxay telefishanka ka soo tebisay daawadayaasha iyagoo maraya biyo cad oo dhagax ah oo leh xeeb dhagax ah oo ay ku hareereysan yihiin dhir doog ah iyo dhagxaan dhaadheer. Dhawr jasiiradood ayaa sidoo kale la sawiray, sida jasiiradaha La Digue Island iyo Jasiiradda gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Desroches Island' oo leh xeeboheeda gaarka ah ee geedaha qumbaha lagu xiray.
Guryahooda, daawadayaashu waxay kaloo ka ogaadeen duurjoogta firfircoon ee laga helay moolka badda Seychelles illaa buuraheeda iyo sidoo kale jasiiradaha caanka ah ee “Coco de Mer,” oo ah lowska ugu weyn adduunka.
Isku soo wada duuboo showga oo ah sheeko xiiso leh iyo ujeedo xiise leh ayaa dhagaystayaasha fursad u siiyay inay ku riyoodaan inay u baxsadaan goobtan xiisaha leh. Iyada oo Jarmalku yahay mid ka mid ah suuqyada muhiimka ah ee Seychelles, baahinta ballaadhan ee quruxda jasiiraduhu waxay xusuus u noqotay dadka Jarmalka in “Adduun kale” ay iyagu gaadhayaan.
Dhibcaha qiimeynta ee ku saabsan "Markabkii Riyada" ayaa muujinaya calaamado muujinaya in Seychelles ay heli lahayd soo-gaadhis ballaadhan intii lagu jiray baahinta. Qiyaasta tirooyinka qiyaastii 6.56 milyan oo daawadayaal ah oo ka socda ZDF, oo ah telefishan u shaqeeya adeegga dadweynaha ee Jarmalka oo ku saleysan warbixinnada dhacdadii "Markabkii Riyada", ayaa la sii daayay isla sannadkaas.
Mar ay ka hadlaysay soo-gaadhista la helay, Madaxa Fulinta ee Golaha Dalxiiska Mrs. Francis Seychelles (STB) waxay tidhi, “Inaan ka soo muuqdo bandhig caan ah oo noocan oo kale ah waxay sharaf weyn u tahay meesha aan u soconno. Waxaan ku faraxsanahay in bilicda jasiiradaha Seychelles ay awoodeen inay la xiriiraan asxaabteena Jarmalka si aan u xusuusino in janno ay u jirto duulimaad.
Jasiiradda yar ee jasiiradda yar ayaa si tartiib tartiib ah u soo dhaweyneysa dalxiisayaasha tan iyo 1-dii Ogosto, 2020, waxayna si joogto ah u xoojineysaa tallaabooyinkeeda nabadgelyo iyo hanaankeeda si loo hubiyo nabadgelyada booqdayaasha iyo dadka deegaanka. Talaabadii ugu dambeysay ee dalka ee dhanka soo kabashada waxay ku lug leedahay maamulka talaalka dadka deegaanka, taas oo gacan ka geysan doonta amniga goobta loo socdo.
Bishii Janaayo 2021, Seychelles waxay ku dhawaaqday inay xeebaheeda u fureyso dadka soo booqda ee dunida oo dhan laga tallaalay waxayna dib u eegis ku sameysay xeerarkeeda amniga. Seychelles waxaa loo furi doonaa adduunka bartamaha bisha Maarso maadaama xilligaas waddanku uu gaari lahaa hadafkiisa ah 70% dadka qaangaarka ah si loo siiyo qiyaasta buuxda ee tallaalka.